के कम्युनिस्ट शासनले संसारसँग झूटो बोलिरहेको छ ? « Salleri Khabar
के कम्युनिस्ट शासनले संसारसँग झूटो बोलिरहेको छ ?
बेइजिङ । चीनमा मंगलबार २५ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको चिनियाँ सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
“मलाई लाग्छ कि तथ्यांक पूर्णरूपमा सही नभए पनि उनीहरूले सुझाव दिन्छ कि चीनले अझ प्रकोप नियन्त्रण गर्न राम्रो काम गरिरहेको छ,” यूएससीका एक प्राध्यापकले फक्स न्यूजलाई बताए । गस्टोनोन इन्स्टिच्यूटका वरिष्ठ फेलो गोर्डन चांग र एटलस संगठनका संस्थापक जोनाथन वार्डले ‘आइतबार बिहानको फ्यूचर्स’ मा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छन् ।
राज्यले सम्बद्ध जनताको दैनिक अखबारका अनुसार चीनले मुख्य भूमिमा मंगलबार कोरोना भाइरसको २५ वटा नयाँ घटनाहरू रिपोर्ट गरेको छ । यो संयुक्त राज्यमा ११ हजार भन्दा कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए । चिनियाँ सरकारले २०१९ को अन्त्यमा पहिलो पटक वुहानबाट बाहिर आउँदा भाइरसलाई डाउनप्ले पार्ने आरोप लगाएको छ र यसको उत्पत्ति लुकाउन र यसको संख्याहरू दबाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
तर के देश अझै पनी बोलेको छ ? चिनियाँ राजनीतिमा विशेषज्ञ, दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टानले रोजेनले फक्स न्यूजलाई ईमेलमार्फत कुनै पनि गलत सम्भावना स्थानीय अधिकारीहरूबाट आउँदछ जसले केन्द्र सरकारलाई रिपोर्ट गर्दछन् । “मलाई लाग्छ कि तथ्यांक पूर्णरूपमा सही नभए पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् कि चीनले अर्को प्रकोप नियन्त्रण गर्न उचित काम गरिरहेको छ,” उनले भने ।
रोजेनले भने कि चीनले एसिम्प्टोमेटिक केसहरू कन्फर्मेसन भएका केसका रूपमा समावेश गर्दैन, तर ती संख्या पनि कम रहेको छ । “जब पारदर्शिताको कुरा आउँछ चीन एकदम अस्पष्ट हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले रिपोर्ट गरेको तथ्यांक कति सहि छ भनेर जान्‍न सधैं गाह्रो छ । र यो प्रश्न थोरै मात्र देखिन्छ कि कोभिड पहिलो पटक वुहानमा सुरु भयो र त्यसपछिको धेरै समयको लागि कोभिडबाट मृत्युको गम्भीर रिपोर्ट गरिएको थियो,” उनले भने ।
वाशिङ्‌टन विश्वविद्यालयको महामारी विज्ञान विभागका अध्यक्ष डा. स्टीफन ई हवसले भने, “महामारीको सुरुमै विश्वव्यापी रूपमा जानकारी रोक्न” र सूचनालाई दबाउनका लागि र चीनमा फैलिएको प्रतिक्रियालाई सुस्त बनाउन ढिलो भएकोमा चीनको सही आलोचना भएको थियो ।”